Chii Chinoshanda muMobile Rich Media Kushambadzira? | Martech Zone
NeChishanu, Gunyana 28, 2012 NeChishanu, Gunyana 28, 2012 Adam Mudiki
Kukura kwenhare hakuregi uye hakukwanisike. Nekudaro, mukati mehumambo hwe nhare dzekushambadzira nzira, iyo mafungu eepamusoro bandwidth mafoni emagetsi ari kuunza mimwe mibairo inobhadhara kana zvasvika kune zvakapfuma midhiya kushambadzira.
ichi infographic kubva kuCeltra inoratidza yekudyidzana data kubva kunosvika makumi matanhatu ruoko nemahwendefa emakampeni kumakambani mana: varaidzo, chitoro, mari uye auto. Metrics akakosha anosanganisira: Engagement mwero, wedzera uye tinya-kuburikidza nemitengo, iko-zvakadzama kutarisa kushambadzira maficha ekuita enhare yakapfuma nhepfenyuro nhepfenyuro.
Pakati pemafomu ekushambadzira, anopfuura 2/3 (67 muzana) aive anowedzerwa mamaki mabhenji, Achiita iyo inonyanya kufarirwa fomati yekushambadzira Yasara 1/3 yemashambadziro akapatsanurwa pakati pemasstatus (21 muzana) nemabhanhire ane hupenyu (12 muzana)
Sezvineiwo, paivepo zvimwe iOS (55 muzana) kushambadza kupfuura Android (45 muzana) asi kubvumidzwa kweApple kuri kuramba kuchikwira uye Celtra anotarisira kuti nhamba idzi dzichachinja mumwedzi iri kuuya.
Engagement mitengo ye nhare mbozha dzakapfuma nhepfenyuro avhareji mune maviri-manhamba (12.8 muzana) ine vhidhiyo uye mitambo yekutamba ndiyo inonyanya kuita.
Zviitiko zveMitambo inoshanda zvakanyanya kuvaraidzo ine (16.6 muzana) yevashandisi vanopindura kuchinhu chemitambo.
Vashandisi vari kuita nevezvenhau kuburikidza neshambadziro mbozhanhare uye nekugovana zvinyorwa zvemhando. (8.7 muzana) vanogovana paFacebook uye (12.6 muzana) Tweet. Uye zvakare, zvigadzirwa zviri kuwedzera kubatanidza matsva enhau enhau masevhisi senge Instagram, mativi mana uye Pinterest.
Zvakananga mhinduro maficha varipo mune akawanda ma ads. Kubaya kune yekunze sevhisi, senge chitoro cheapp, kana webhusaiti inowanzo kuverengerwa mushambadziro.
Flash Kutengesa Kuva Izvo Zvakaenzana Zvakaenzana zve Outlet Stores